Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Lagu Fasirayo Fiidiyowyada (Tusaalayaasha) | Martech Zone
Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Fasiraadaha Fiidiyowyada (tusaalayaal)
Talaado, Juun 3, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaad u badan tahay inaad aragtay degello badan oo adeegsanaya fiidiyowyo xayeysiis ah oo ku yaal bogagga degitaankooda. Macno malahan haddii aad magacawdo fiidiyow sharraxayaal ah ama fiidiyowyo shirkadeed; dhammaantood waxay u adeegaan ujeedo isku mid ah: si ay ugu fasiraan wax soo saar ama adeeg si fudud oo dhakhso leh, taas oo ka dhigaysa iyaga aalad suuqgeyn weyn u leh ganacsi kasta.
Maxay u jiraan qaabab kaladuwan oo fiidiyowyo sharrax ah? Nooc kasta wuxuu rafcaan u yahay nooc dhageystayaal ah wuxuuna sidoo kale saameyn ku yeelan doonaa miisaaniyadda wax soo saar kasta oo fiidiyoow ah. Si loo soo jiito dareenka dhagaystayaashaada oo aad runtii u bilowdo beddelaad, waa inaad mid walba ogaataa style ee Video Sharaxa. Su’aashu waxay tahay:
Muxuu yahay qaabka ugufiican ee fiidiyoow sharaxaad leh oo loogu talagalay boggaaga?
Waxaan soo ururinay liistada qaababka ugu caansan ee fiidiyowyada suuq-geynta dhaqdhaqaaqa, oo ay weheliyaan talooyinkayaga gaarka ah ee mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Kani waa shaashad shaashad fudud ama filim fiidiyoow ah oo muujinaya sida loo isticmaalo barnaamij, degel ama softiweer. Fiidiyowyada Shaashadda ayaa ah nooca ugu miisaaniyadda yar ee fiidiyoowga laakiin si isku mid ah waxtar u leh. Fiidiyowyadani waxay ka badan yihiin waxbarashada marka loo eego sumadda. Waxay caadi ahaan yihiin fiidiyowyo dhaadheer (in ka badan 5 daqiiqo), waxayna si fiican ugu shaqeeyaan rajooyinka jecel inay daawadaan sida sheygu u shaqeynayo ka hor inta aysan tallaabo qaadin.
Qaabka Kartoonada ama Muuqaalka Muuqaalka Sawirka
Tani waa mid ka mid ah noocyada fiidiyoowga sharaxaadda leh ee ugu caansan suuqa. Sheeko waxaa hogaamiya qof jilaa ah, oo loo soo bandhigo dhibaato weyn oo uusan isagu ama iyadu xallin karin. Taasi waa marka badeecadaada ama adeeggaagu u muuqdo… maalinta badbaadinaysa!
Dabeecaddu badanaa waxay mataleysaa magacaaga shakhsiyadeed (bartilmaameedka dhagaystayaasha), markaa waa muhiim inaad yeelato dabeecad naqshad caadil ah oo run ahaantii la xiriirta iyaga, bini'aadannimada astaantaada adoo siinaya shucuur iyo shakhsiyad. Noocyada fiidiyowyada noocan ahi waxay leeyihiin natiijooyin wanaagsan maxaa yeelay waxay si dhakhso leh u qabtaan dareenka daawadayaasha oo runtii xiiso u leh daawashada.
Farsamadan casriga ah ee qabow waxaa markii hore abuuray sawir qaade oo ku xardhay sabuurad iyadoo ay duubeyso kamarad. Mar dambe, farsamadan ayaa soo baxday oo hadda loo sameeyay qaab dijitaal ah. Ku soo noqoshada 2007, UPS waxay soo bandhigtay Xayeysiisyada Whiteboard, iyo 2010 Jaaliyada Royal ee Farshaxanka waxay abuureen animations sabuurad laga soo qaatay khudbadaha la xushay, taasoo ka dhigaysa kanaalka Youtube ee RSA inuu yahay kanaalka aan faa'iido doonka ahayn ee # 1 adduunka oo dhan.
Sawirada 'Whiteboard Animations' waa farsamo soo jiidasho leh, maxaa yeelay waxay leedahay qaab waxbarasho, halkaas oo nuxurka laga abuuray indhaha daawadayaasha hortiisa.
Sawirada dhaqdhaqaaqa waa, asal ahaan, walxaha garaafka ee dhaqdhaqaaqa adeegsada awooda midabada iyo qaababka si ay u gudbiyaan fariimo isku dhafan oo aan macquul aheyn in si kale loo gudbiyo. Fiidiyowyadani waxay bixiyaan qaabab soo jiidasho leh oo loogu talagalay ganacsiyada leh astaamo aad u culus waana hab fiican oo lagu sharxo fikradaha la taaban karo.
Fiidiyowyadan sharraxaaddu waxay si gaar ah saameyn ugu leeyihiin dadaallada isgaarsiinta B2B.
Motion Graphics oo leh Elements 3D
Motion Graphics animation oo leh is-dhexgal xubno 3D ah ayaa keena muuqaal qurux badan oo casri ah. Waxay ku habboon yihiin inay shirkaddaada ka dhigaan mid ka sarreysa tartanka.
Motion Graphics waa xulashada ugu fiican ee shirkadaha iyo wax soo saarka la xiriira teknoolojiyada cusub, adeegyada dhijitaalka ah, barnaamijyada ama softiweerka.
Qaabka Kartoonada ee Motion Graphics
Fiidiyowga Sharaxa Kartoonada ee leh Motion Graphics waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee fiidiyowga la duubay oo halkaas ka jira, sida ugu fudud ee ay u muuqatona, waxay isu keenayaan farsamooyin isku dhafan. Jilayaasha Kartoonada ayaa hogaaminaya sheekada waxayna si dhow ula socdaan dhagaystayaasha, halka adeegsiga animation muuqaallada animation loo adeegsado in lagu sharaxo fikradaha qalafsan.
Qaabkan, waxaan ku helaynaa kan ugu fiican labada adduun - Dhinac saaxiibtinimo iyo sarbeebyo cajaa'ib leh oo muuqaal muuqaal ah oo kartoon ah iyo awoodda ku lug lahaanshaha animation ee farsamada sawirada dhaqdhaqaaqa.
Waxaan kugula talineynaa isgaarsiinta B2C, laakiin si fiican ayey ugu shaqeyn karaan ganacsiyada yaryar iyo bilowgaba sidoo kale.
Fiidiyowyada Dhaqdhaqaaqa Joojinta ama Claymation-ka
Fiidiyeyaasha sharraxaadda Joojinta-dhaqdhaqaaqa waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu da'da weyn maaddaama aysan ku tiirsaneyn tiknoolajiyad heer sare ah! Kuwani waa fiidiyowyo gacmo-gacmeed lagu farsameeyay - oo lagu dhammaystiray jir.
Animation-kan waxaa lagu soo saaray iyadoo la duubayo shax kasta, ama wali sawir ka dibna looxyada la duubay dib loogu laabo si isdaba-joog ah, qaadashada waqti dheerna la soo saaro. Natiijooyinka gebi ahaanba way ka duwan yihiin oo aad bay u yaab badan yihiin. Jooji dhaqdhaqaaqa waa farsamo qurux badan marka si fiican loo dhammeeyo, iyaguna way qaali noqon karaan.
Waxaan kugula talineynaa fiidiyowga noocan ah haddii aad rabto inaad u adeegsato hab dareen leh dhagaystayaashaada.
A xirfad leh 3D animated video runti waxay noqon kartaa wax la yaab leh, maaddaama aysan xad lahayn waxa fiidiyowga 3D-ga ah uu ku dhammayn karo. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarkan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan, sidaas darteed maahan ikhtiyaar loogu talagalay bilawga miisaaniyadaha xaddidan.
Hadaad runti ka fikireyso sameynta 3D muuqaal duuban oo aad awoodi karto, waa inaad marka hore sameysaa shaqada gurigaaga oo aad raadsataa shirkado khibrad leh. Miisaaniyad yar oo fiidiyoow ah oo 3D ah ayaa si dhab ah u horseedi karta natiijooyin xun.
Hadda waxaad haysaa aragti guud oo ah nooca sharaxaadda muuqaalka leh ee fiidiyoowga ah ee ku habboon boggaaga soo degitaanka ganacsigaaga, kaas oo sida ugu wax ku oolka ah u soo jiidan doona dareenka dhagaystayaashaada. Ma rabtaa inbadan? Soodejiso ebook-ka bilaashka ah ee Yum Yum Video - Tilmaamaha ugu dambeeya ee lagu sharxo Fiidiyowyada!
Bixinta: Yum Yum wuxuu gacan ka geystey isku dhajinta boostadan Martech Zone akhristayaasha waxaanan toos ulashaqeynay dhowr mashruuc!
Tags: 3d fiidiyowyo firfircoon3d animation3d fiidiyowfiidiyo muuqaal lehvideo kartoon ahdabeecad muuqaal ah oo muuqaal ahanimation dhoobodhoobovideo sharaxefiidiyeyaasha sharraxanaqshadeynta mooshinmuuqaal muuqaal muuqaal ahshaashadda shaashaddajoojinta-dhaqdhaqaaqafiidyow animation muuqaal ahfiidiyow sharaxe sabuurad ah
Warbaahinta Bulshada ee Warshadaha Unsexy B2B
Sep 21, 2014 at 6: 04 PM
Waxaan ku jiraa bey'adda wax ka raadinta waxyaabaha noocan oo kale ah si fiican oo si wanaagsan loogu sharraxay tusaale fiican.
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalkaan iyo fiidiyowga xog-ogaalka ah.
May 14, 2015 at 6: 16 PM
Hadda markasta oo ay macaamiishaydu i weydiiyaan nooca fiidiyowga sharraxa ah ee aan sameeyo waxaan hayaa tilmaamahan anfacaya si aan u tuso. Waad ku mahadsan tahay Douglas isku dubbarida tilmaantan. Ma jirtaa wax kasta oo aad karti u leedihiin inaad ku soo bandhigtaan ganacsigeyga bartaada? Waxaan galiyay e-maylkeyga qeybta faallooyinka